आहुतिको गीत ‘आऊ सँगसँगै’ सार्वजनिक
काठमाडौँ । वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका महासचिव आहुतिको ‘फूलहरू आऊ सँगसँगै’ बोलको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ ।
शनिवार राती ८ बजे थाहा यात्रा युट्युब च्यानलमार्फत उक्त गीत सार्वजनिक भएको हो । आहुतिको रचना तथा संगीत रहेको सो गीतमा खेमलाल विश्वकर्मा, मोहन मगर, पुष्कर सुनुवार, विमला परियार, अनुमा चौधरी र समृद्धि परियारको स्वर रहेको छ ।
मेलोडी नेपाल स्टुडियोले उत्पादन गरेको उक्त गीतको एरेन्ज/मिक्स/मास्टर पुष्कर सुनुवारले गरेका हुन् ।
समाजमा रहेका असमानता र विभेदहरू एक्लै होइन ‘सँगसँगै’ मिलेर हटाउनुपर्नेमा गीतले जोड दिएको छ । अन्याय, अत्याचार र बेथितिका विरुद्ध सबै एकजुट भएर अगाडि बढे मात्र सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने गीतको भाव रहेको छ ।
सारा बाधा अड्चनहरू भत्काएर गरिखाने श्रमजीवी वर्गले आफ्नो दुःखको आँसु र सुखको हाँसो दुबैलाई ज्वालामुखी झैँ बनाउनु पर्ने अनि मात्र टाढाको समाजवादी लक्ष्य भेट्न सकिने भन्दै एक्लै यी कुराहरू हटाउन नसकिने भएकाले सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने सन्देश यस गीतमार्फत आहुतिले दिएका छन् ।
गायिका दिलमाया सुनार मृत भेटिइन्, एकजना पक्राउ
संगीतको संयोजनमा शरीरले व्यक्त गरेको त्यो दुखाइ- ऐया! माया
कुमार प्रयासकाे ‘अस्ताएकी आमा’ सार्वजनिक (भिडिओसहित)
अझै चर्को गुञ्जिँदै जाओस् ‘चोरको स्वर’ !
यी कलाकारले पाउने छन् विमानस्थलको ‘भिआइपी कक्ष’ प्रयोग गर्न
शरीर, आवाज र संगीतको नयाँ प्रयोगः असार ७ देखि ‘ऐया ! माया’ को मञ्चन शुरू
आज गायिका इन्दिरा जोशीको बिहे